Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Puntland oo kormeer ku tagey xaruntii hore ee Wasaaradda Maaliyadda(Sawirro+Muuqaal) – Wasaaradda Maaliyadda
April 11, 2022	in Warka
GAROOWE – Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland Mudane Xasan Shire Cabdi ayaa kormeer shaqo ku tegay Xaruntii hore ee Wasaaradda Maaliyadda oo dhisme looga bilaabay Ciidamada Ilaalada Canshuuraha, Dhismaha Dakhliga Maaliyadda iyo Kastamka kantaroolka Garoowe.
Kormeerkan Wasiirka waxaa ku weheliyey Wasiirku xigeenka Maaliyadda, Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland, Agaasime Ku-xigenka guud ee dakhliga, Agaasimaha Furdooyinka iyo mas’uuliyiin kale
Dhismaha cusub ee Ciidamada Ilaalada Canshuuraha ayaa qaban doona shaqooyin isugu jira sidii loo horumarin laahaa goobaha soo dhowaynta dakhli bixiyaha.
Wasiirka ayaa sidoo kale booqaday Kastamka kantaroolka waxana uu u kuur galay wax ka ogaanshaha dakhliga iyo habsami u socodka shaqada Wasaradda Maaliyadda.
Dhismaha Dakhliga ee Wasaaradda Maaliyadda Gobolka Nugaal oo marayaa heer gabo gabo ah ayaa waxaa warbixin ka siiyay Wasiirka iyo Wasiirku xigeenka Maaliyadda Eng. Haashim Xaaji Maxamed Aw Axmed oo ka tirsan shirkada Albaashid wuxuuna la wadaagay xogta Dhismaha oo dhowaan la soo af-meeri doono.
Dhanka kale Wasiirka ayaa kulan la qaatay hawlwadeenada gobolka isagoo ka dhagaystay hawlaha dakhliga iyo dadaalada la wado si loo xaqiijiyo soo uruurinta kutalagalka miisaaniyada gobolka.
Wasiirka Maaliyadda Mudane Xasan Shire Cabdi ayaa sanadka 2022 ku asteeyay xoojinta nidaamka dakhli uruurinta Maaliyadu si loo laba jibaaro dadaalkeeda ku aaddan dardar-gelinta dakhliga iyo kicinta cashuuraha fadhiidka ah sida macaash-macaashka ganacsiga, xirfadlayaasha , cashuurta kirada daaraha, cashuurta shaqaalaha aan dawliga ahayn, kala-wareejinadda, diiwan galinta qandraasyada, cashuurta gadista iwm.
Ugu danbayntii, Wasaaradda Maaliyadda ayaa ku hanweyn in sare loo qaado wadashaqaynta hayaddaha dakhli-soo-saarka ka caawiya Wasaaradda Maaliyadda si loo gaaro kororka dakhli ee la filayo loogana baaqsado is-dhin dakhliga